Jawaari oo la wareegay xarunta BF xilli Muudeey iyo xildhibaanadii taageersanaa ay hoolka isaga baxeen - Caasimada Online
Home Warar Jawaari oo la wareegay xarunta BF xilli Muudeey iyo xildhibaanadii taageersanaa ay hoolka...
Jawaari oo la wareegay xarunta BF xilli Muudeey iyo xildhibaanadii taageersanaa ay hoolka isaga baxeen
Muqdisho (Caasimadda Online) – Wararkii ugu dambeeyay ee Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegaya in Xarunta ay ka baxeyn Xildhibaanadii mooshinka waday iyo Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka Cabdi wali shiikh Ibraahim Muudeey.
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka gaar ahaan xildhibaanada Mooshinka wada ayaa KNN u sheegay in Ciidamo uu wato Guddoomiye Jawaari ay xoog ku qabsadeen Xarunta Golaha Shacabka taasina ay sababtay in Xildhibaanada ay dib Guryahooda ugu laabtaan.
Wararka ayaa sheegayo inay Xildhibaanadaas sheegeen inaysan gudaha u geli karin Xarunta haddii aanan laga soo saarin Ciidamada hubeysan ee taabacsan Jawaari ee gudaha u galay xarunta Baarlamaanka.
Xildhibaanada kasoo horjeedo Muudey ayaa iyagana sheegay inay hub la geli doonaan Xarunta baarlamaanka haddii aan kuwa Jawaari laga soo saarin.
Waxaa muuqato inuu kulankii Maanta fashilmay isla markaasna uu hirgalay Qorshihii garabka Jawaari taagersan oo ahaa in laga shaqeeyo sidii kulankaan loo fashilin lahaa.
Qaar ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka oo la hadlay wariyaasheena ku sugan xarunta baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay wax laga xumaado tahay in Guddoomiyaha Baarlamaanka uu Xarunta shacabka la galo hub iyo ciidan badan midaasna ay tahay sharci darro.